3-da Bedel ee ugu Fiican VideoScribe | Golaha Moobaylka
Cristian Garcia | | Barnaamijyada
VideoScribe waa mid ka mid ah kuwa sameeya fiidiyowga sabuuradda ah ee loo yaqaan 'whiteboard video abuurayaasha' oo aan dhammaantood wada isticmaalnay waqti aanna dib u qaban, maxaa yeelay guud ahaan, waa la siiyaa lacag. Waa barnaamij weyn oo leh tijaabadiisa bilaashka ah ee ku dhammaata muddo gaaban isla markaana naga dhigta inaan wax badan sii doonno, tan iyo markii la waxaad ku abuuri kartaa fiidiyowyo soo jiidasho leh qaab aad u fudud.
VideoScribe uma baahna xirfado gaar ah ama saacado casharro ah, waa uun barnaamij fudud oo qalab aad u anfacaya oo waxtar leh. Tusaale ahaan, mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah fiidiyowyada ayaa la socon kara muusikada, waad kula wadaagi kartaa Facebook ama YouTube toos ah iyo liis dheer oo qalab waxtar leh.
Haddii ay jirto hal dhinac oo aan ku iftiimin karno 200% ee barnaamijkan, waxay ahaan laheyd bogag muuqaal iyo hal abuur leh oo aad ku qaabeyn karto. Gmahadsanid naqshadaheeda kaladuwan oo lagu dhaqdhaqaajiyay animation-dhaqaaq wax walboo way ka muuqan doonaan soo bandhigidaada, taas oo noqon doonta 10. animations-yadaas waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho bandhigyo badan oo shaqsiyadeed iyo hal abuur kuwaas oo u gudbin doona asalka iyo hal-abuurka tiro badan.
1 Beddelka ugu fiican ee Videoescribe
4 Dheeraad ah
Beddelka ugu fiican ee Videoescribe
Haddii aad halkan timaadid waa sababta oo ah waxaad jeclaan lahayd inaad ogaato barnaamijyo kala duwan oo si fudud u noqon kara video qor beddelaad! Taasi ugu yaraan dhammaantood waxay la mid yihiin ama nuqul ka sameysmayaan qalabkooda oo ay sahlanaan karaan marka la abuurayo fiidiyowyo ama soo bandhigyo hal abuur iyo asal ah, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, inaan la siinin wax lacag ah ama aysan lahayn tijaabooyin bilaash ah. Tani waxay ku siin doontaa waqti aad ku siiso taabasho shaqsiyeed wax kasta oo aad sameyso, arrimahaas asalka ah ayaa muhiim ah. Sidaa darteed markan, waxaan halkaa ugu aadnaynaa liistada:
Haiku Deck waa barnaamij aad u wanaagsan oo lagu abuuro bandhigyo hal abuur leh haddii aad tahay isticmaale taleefannada gacanta iyo kiniiniyada. Haddii aad naftaada u hurto inaad abuurto bandhigyo ku saabsan qalabkan nolol maalmeedkaaga, markaa waxaan kugula talineynaa inaad rakibto barnaamijka Haiku sagxad ah adigoon ka fikirin, hadda. Barnaamijkan waa bilaash in la isticmaaloSi ka duwan VideoScribe, waxay siisaa tan qalab ah oo aad u isticmaali karto si aad u abuurto bandhigyada madadaalo iyo hal abuur leh. Arday badan oo waaweyn waxay doorbidaan barnaamijkan si ay u abuuraan bandhigyo qumman oo ku saabsan shaqadooda oo ay isku dayaan inay helaan darajo wanaagsan, markaa haddii ay adeegsadaan, ayaa lagula taliyay.
Video-ga waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fudud ee la isticmaali karo si loo abuuro bandhigyo ama bandhigyo muuqaal ah. Liiskan fiidiyowga wuxuu ka qorayaa waxyaabo kale, waxay noqon kartaa midka hoggaanka noqon lahaa si loo siiyo abaalmarinta kan ugu fiican. Haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad ku abuurto fiidiyowyo firfircoon oo hal abuur leh waqti aad u gaaban adigoon saacado ku qaadan YouTube-ka adigoo wata kumanaan fiidiyoow ah, Wideo waa aaladdaada shaki la’aan.
Wideo waa qalab taas oo aad ka heli doontid internetka oo dhammaystiran, oo aan wax soo dejin ah. Waxa kaliya ee aan ku weydiin doono hawshii hore oo dhan waa inaad isdiiwaangeliso oo aad ku xaqiijiso diiwaangelinta emayl, sidii caadiga ahayd.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad si dhakhso leh oo fudud oo daqiiqado ah uga sameysatid fiidiyoow xoqitaanka, dabcan waa ikhtiyaarkaaga maxaa yeelay habka abuurista fiidiyowga waxay qaadan kartaa arrin daqiiqado ah.
Barnaamijku wuxuu leeyahay a interface fudud oo ka baxsan sanduuqa iyo tusaalooyin kala duwan, animations kala duwan iyo sawiro kuwaas oo kuu fududeynaya inaad abuurto fiidiyowgaagii ugu horeeyay. Wideo waxaad ugu noolaan kartaa qaab aad u dhakhso badan oo fudud adoo galinaya sawirro iyo qoraal. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa dhaqdhaqaaq kuwan ama waxaad u isticmaali kartaa inta ka hartay sawirrada ma guurtada ah ee aad haysato ee aad ku dhex leedahay qolka bilaashka ah. Waxaas oo dhan waxaa u dheer, waxay kaloo leedahay aalad ay ku jirto waxaad awoodi doontaa inaad xakameyso waqtiyada iyo kala guurka. Dabcan, sidoo kale waad awoodaa ku dar cajalado kala duwan oo wax ka bedel sawirada qaar qaab fudud oo aad ugu darto fiidiyahaaga.
Barnaamijku wuxuu leeyahay nooc tijaabo ah oo aad u adeegsan karto sameynta fiidiyowyo ilaa 1 daqiiqo ah. Markaad sameysid fiidiyowgaas, waad ku soo dejisan kartaa qaab MP4 ah. Nasiib darrose, nama oggolaanayso inaan ku bixinno qaabab ama sifooyin kale. Ikhtiyaarka kale ee ay bixiso waa taas la wadaag macluumaadkaaga warbaahinta bulshada, oo leh twitter, Facebook ama inaad ku ridi karto koodhkeeda websaydh ama madal jaamacadeed oo kuu oggolaanaysa inaad geliso fiidiyowyada.
Haddii aan ka hadalno faa'iidooyinka nooca bilaashka ah, waa in sidaas la dhaho waxay na siisaa qadar aad u wanaagsan oo qalab ah. Waxay na siineysaa suurtagalnimada abuurista fiidiyoowyo aad u wanaagsan, oo leh muuqaal xirfad leh oo aan u baahnayn aqoon hore. Waxaan mar kale kuu xaqiijineynaa taas waqti aad u gaaban (waqtigani wuxuu ku xirnaan doonaa sida saxda ah ee aad u rabto inaad uga baxdo fiidiyahaaga) waxaad heleysaa muuqaal cusub oo midabo badan leh Dabcanna waxay kuugu adeegi doontaa ku dhowaad waxaad rabto.
Haddii aad wax badan u jeceshahay, illaa heer aad jeceshahay inaad ku kasbato nooca lacagta lagu siiyay dhammaan qalabka, maxaa yeelay waxaad u aragtaa inay ku siin karto magdhow, inaad ogtahay inaad ballaarin doonto faa'iidooyinkeeda wax badan. Laga soo bilaabo websaydhkooda rasmiga ah waxay na siiyaan wax ka duwan qorshayaasha qiimaha. Dhexdooda ayaa ku kala duwan tirada soo dejinta aad sameyn karto, muddada fiidiyowyada aad abuureyso iyo gaar ahaan arrimo loo oggol yahay fiidiyow kasta. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 15 iyo 66 euro bishii.
In kastoo, haddii ay u egtahay wax badan, aad leedahay ikhtiyaar dhexdhexaad ah oo kaa kireyn kara wax badan oo ku saabsan 32 euro. Ka taxaddar maaddaama qiimaha lagu muujiyey bogga rasmiga ay yihiin doollar, sidaa darteed waa inaad isbedelka sameysaa halkaasna waxaad ku arki doontaa kala duwanaanta.
Waa run in wax kasta oo dhalaalayaa aysan dahab ahayn, sidaa darteed ma joojin karno ka hadalka Wideo adigoon ka hadlin mid ka mid ah qasaarooyinkiisa ugu weyn. Barnaamijku nasiib daro wuxuu u baahan yahay Adobe Flash Player inaad awood u yeelatid inaad sameysid dhammaan fiidiyowyadaas la duubay, sidaa darteed had iyo jeer waa inaad awood u yeelatid ka hor intaadan bilaabin sameynta fiidiyowyo ku jira Wideo.
In kasta oo ay tahay fikrad shaqsiyadeed, sidaan kor ku soo xusay, haddii waxa aan raadineyno ay yihiin beddelaadyo fiidiyoow-qoris ah, waxaan u maleynayaa inay tahay qalab ku habboon abuurista fiidiyowyo firfircoon ama gaagaaban, taasoo waxtar weyn u yeelan kara inta lagu guda jiro koorsada arday ahaan ama xitaa shabakadahaaga bulshada.
Gali 3-da sare ee fiidiyowga wuxuu qorayaa waxyaabo kale oo midkaas ahMarkii hore waxaa loogu magac daray Go Animate. Vyondse waxaa loo soo bandhigaa inay tahay bedel weyn oo loo abuuro fiidiyowyo firfircoon oo qaab fudud oo xiiso leh. Barnaamijku wuxuu leeyahay ikhtiyaarro badan oo kaladuwan oo runtii kaa caawin doona inaad turjunto fikraddaas aad madaxa ku hayso oo aad u baahan tahay inaad run ka dhigato.
Isku xirka Vyondse sidoo kale waa mid aad u dareen leh, oo leh ikhtiyaarro ka badan kan Wideo, adoo awood u leh inaad doorato noocyo fiidiyoowyo ah iyo nooc kasta oo ka mid ah, xulashooyin badan oo jilayaal ah, dejinno ama animations. Fursadaha ayaa runtii aad u kala duwan, sidaa darteed waxaad heli kartaa fiidiyowyada ugu dhameystiran.
Dabcan, waxay qaadan doontaa wax yar ka yar in la abuuro fiidiyoowyo firfircoon, haddii kaliya waqtiga (si fiican) loo maalgashan lahaa sahaminta iyo la ciyaarista xulashooyinka kala duwan.
Vyondse ayaa leh nooc bilaash ah oo ku siinaya 14 maalmood si loo arko haddii ay ku qancinayso iyo in kale. Mid ka mid ah dabada barnaamijkan iyo nooca bilaashka ah ayaa ah in dhammaan fiidiyowyada lagu abuuray qaabkan ay ka muuqan doonaan calaamadeynta bartamaha fiidiyaha. Dhibaatadaas weyn ka sokow, ma awoodi doontid inaad soo dejiso wax fiidiyow ah, maaddaama ay kaliya u oggolaanayso iyaga oo lala wadaago iyada oo loo maro xiriiriye ay ku siin doonaan dhammaadka isla fiidiyowga.
Waxay noqon kartaa inaad kaliya raadineysay inaad wax ka beddesho ama aad abuurto hal fiidiyoow waqti ku habboon, markaa waxay u eg tahay taas ma aha nooca saxda ah ee adiga kugu habboon. Waxa aan kuu sheegi karno ayaa ah, haddii aad abuureyso fiidiyowyo yar, waa qalab lagu xisaabtamo oo laga dhigo mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya. Barnaamijku wuu ku siinayaa noocyo kala duwan ama hababka rukunka Taas oo aad ku samayn karto fiidiyowyo leh muuqaal xirfad leh oo aad ugu kala duwan qaabkooda. Waxaan damaanad qaadaynaa inay tahay aalad dib kuu soo celin doonta haddii aad maalin kasta la shaqeyso.
Kama bixi karno adoon sii deynin, adigana waa kugu baran doontaa. Dhibaatada weyn ee aragtideena Vyondse waa taas, sida Wideo, waxaad ubaahantahay firfircooni Flash PlayerTan iyo markii aadan haysan firfircoon, ma awoodi doontid inaad aragto fiidiyowyada firfircoon ee aad abuurtay si kasta.
Waqtigan xaadirka ah iyo ka dib markaan sameeyay fiidiyowga 3-aad ee ugu sarreeya wuxuu qorayaa waxyaabo kale, waxaan kuu sheegi karnaa inay jiraan dad kale oo aad u tiro yar, haa, laakiin dhammaantood waxay wadaagaan qorshooyinka tijaabada iyo lacag-bixinta, markaa markay tahay abuurista fiidiyowyo bilaash ah, saddexdan annaga ayaa abuurnay kuwaas oo ah xulashooyinka saxda ah, xitaa haddii ay tahay inta lagu jiro tijaabadaada. Waxay u badan tahay, haddii aad la shaqeysid maalin kasta, waxaad ku dambeyn doontaa bixinta rukumadooda tan iyo qalabkii sida Wideo, aad ayey u qalantaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Top 3 Beddelka in VideoScribe
6da bedel ee ugu wanaagsan Airbnb ee kireynta guryaha
Waa maxay NFC iyo sida aad u isticmaali karto